I-Starbucks Coupon Fraud: Kutheni ungakhangeli ibhakhowudi? | Martech Zone
I-Starbucks Coupon Fraud: Kutheni ungakhangeli ibhakhowudi?
NgoLwesine, Agasti 31, 2006 NgoLwesine, Agasti 31, 2006 Douglas Karr
KaSete blog Inqaku malunga nesiponi esingaphathwanga kakuhle kwiStarbucks. Ngenxa yobungakanani beStarbuck, andiqondi ukuba kutheni bengafakwanga isicwangciso sekhuphoni esinebhakhowudi. Obu yitekhnoloji elula kwaye engabizi kakhulu… ifuna kuphela ukuqinisekiswa kwiKhompyuter yeNqaku leNkonzo.
Ungakwenza njani oku? Uninzi lwabathengisi be-imeyile abathengisa isoftware bavumela imitya yokufaka endaweni (ukuba ayenzi njalo, yiya ku NgqoThagethi). Oko kuthetha ukuba ungawudlula ngokulula umtya kwindlela yomfanekiso. Umtya ogqityiweyo ngelixa i-imeyile ivulwa ngokwenyani iyakha ibhakhowudi ngamandla, ke i-Starbucks inokuthi ibhale ngokulula uhlobo oluthile lwekhowudi yekhuphoni-eyahlukileyo kumbhalisi-kwaye ikhuphe njengebhakhowudi.
Xa ihlawulwe, umphathi wecashier angayijonga nge-imeyile kunye nebhakhowudi kuyo. Ixabiso lijongwa phezulu ngaphakathi kwenkqubo emva koko likhangelwe ubunyani KANYE nokuhlawulelwa. Ukongeza, ukuhlawulelwa kwekhuphoni kungabhaliswa kwakhona kwi-Idilesi ye-imeyile yokwenyani- ukubonelela uMarketer ngolwazi oluxabisekileyo malunga nokuba ngubani okhulule isigqebhezana, ukuba uthathe ixesha elingakanani, ulikhulule phi, njl. Ngokuqinisekileyo ulwazi oluya kuba sisixhobo esikhulu phantsi kwendlela!
Ngaphandle kwetekhnoloji yeshelufu kunye nocwangciso olulula, i-Starbucks ngekhe yazisindisa ihlazo.
Iiblogi kunye neentyatyambo: Imbewu, uKhula, iPollin kunye nokukhula
Aug 31, 2006 ngo-8:55 PM
Ingcebiso yakho ilungile. Ndiyazibuza ukuba benza ntoni abafana be-IT be-Starbuck?